01 Aogositra 2020 - FJKM Québec - Canada
01 Aogositra 2020
31 juillet 2020 by FJKM-QUEBEC
MATIO 2 : 13-15
2:13 Ary nony efa lasa nandeha ireo, indro, nisy anjelin’ny Tompo niseho Ary nony efa lasa nandeha ireo, indro, nisy anjelin’ny Tompo niseho tamin’i Josefa tamin’ny nofy ka nanao hoe: Mifohaza ianao, ka ento ny Zazakely sy ny reniny, dia mandosira any Egypta, ary mitoera any ambara-pilazako aminao; fa i Heroda efa hitady ny Zazakely hovonoiny.
2:14 Dia nifoha izy ka nitondra ny Zazakely sy ny reniny, raha mbola alina, dia lasa nankany Egypta;
2:15 ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin’i Heroda, mba hahatanteraka izay nampilazain’i Jehovah ny mpaminany hoe: Nantsoiko hiala tany Egypta ny zanako. (Hos 11.1)
1-Mibaiko ny olony ny Tompo
Ny tantaran’i Jesoa fony Izy mbola zazakely vao teraka no voalaza eto .Tonga namangy Azy ny magy ary rehefa lasa nandeha izy ireo dia nisy baiko avy amin’ny Tompo Andriamanitra tamin’ny alalan’ny anjely ho an’i Josefa ary miantefa amin’ny zazakely sy ny reniny koa. Mariho tsara fa rehefa baiko dia baiko , tahaka ny any amin’ny miaramila mihitsy : mifohaza , izany hoe : tsy maintsy ho tapaka ny torimaso ka hiteraka fahasorenana mafy izany. Tsy vitan’izany anefa fa ento ny zazakely sy ny reniny dia mandosira any Egypta .Hevero kely ny fahasarotan’izany toe-javatra izany : vao terabao i Maria , izany hoe : mbola marefo , tsy maintsy ho voakotaba amin’izany zava-misy izany ilay zazakely , kanefa mazava ny baiko : mifohaza , ento ny zazakely sy ny reniny dia mandosira.
2-Mila fankatoavana izany baiko izany
Toa tsotra dia tsotra ny filazana ny zava-misy eo amin’ny and 14 , nefa hevero fa tokony ho nisy baraingo maro samihafa mihitsy tao an-tsain’i Josefa hoe : Inona no hohaninay ? Inona no handehananay ? Aiza no hitobianay ? Hanao ahoana ny ho fiainanay ?…Tsy ahitana taratra izany anefa eto raha ny marina fa dia baiko mazava sy fankatoavana tsy misy fepetra no misy eto . Ny ao an-tsaina manoloana izany dia ny fatokiana ny fitantanan’ny Tompo Andriamanitra ny fiainan’ny olona tokoa satria hoy ny teniny hoe : « ny zanako sy ny asan’ny tànako dia aoka ho adidiko ihany » (Isa 45.11) ary tokony ho ao an-tsaina hatrany koa ilay tenin’ny Tompo Jesoa ao amin’ny Mat 6.32-33 .
Mbola vonona hankato tsy misy fepetra ny baikon’ny Tompo ve ny olona ankehitriny ?